Tapaka lava e - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ratalata Jn Ba il y a 12 mois
Hoy ity Ranamana iray teo amin’ny rindriny ao amin’ny fesiboky ao.
Ny lehilahy Malagasy dia zatra miaina amin’ny fahatapahana :
- Vao teraka dia tapahana ny tady mifandray aminy sy ny reniny!
- Kelikely monja dia tapahana ny volony io ilay ala volon-jaza
- Avy eo dia tapahana ilay zava-misy io ilay didi-poitra!
- Tapa-dalana ny frais hitalahoana amin’ny resevera fony mbola mpianatra!
- Mba anaovy mofo tapany dia asiana lasary azafady!
- Tena tapaka sy namana leisy fa mba hiantohy ny revy androany!
- Maka sary tapaka atao anaty cv fa hitady asa!
- Tapahan'ny vehivavy ny fifandraisana amin’ny fesiboky raha vao miadaladala!
- Anaovy bota tapany azafady!
- Tapa-tsinay rahefa sendra misy namana alefa eny amin’ny solaitra be!
- Tapatapaka koa ny fianarana fa misy grevy hono!
- Kafe tapany dia ampiana tapany ahazoana kokoa noho ny maka iray kaopy indray mandeha eny amin’ny mpivarotra!
- Tapaka ilay antso teo azafady fa lany ny fahana (efa mitrosa @zay eo fa mafy ny ady)!
- Tapaka akia ny connexion fa lany mega aho an!
- Tapaka koa ny feeling indraindray rahefa...
- Tapa-bolana leisy tsy niverina ny... hoy ilay vehivavy, tora-kovitra sy malemy ny lohalika!
- Tantely tapa-bata hono no filazana hoe mila mitondra zavatra ho an'ny rafozana!
- Tapaka hono ny làlana amin'ny ora tena mahamaika fa misy Camion mitsivalana be eo amin’ny arabe!
- Indrisy mantsy ry tapa-tsosisy dia fehezan-teny mandalo amin'ny ankamaroan'ny lehilahy indrindra raha tsy nety ny tantana tamin'ny tovovavy!
- Tapa-tongotra rahefa miaraka amin'ny vehivavy : ny anao ireny namanao ireny foana, za tsy mba jerenao mihitsy!
- Manao tapa-zy noktiorina hono rahefa sendra mba mihira mafy alinalina iny entin'ny sento!
-Domiko tapany leisy dia mandoa erany hoy ilay lehilahy bebe fika!
- Rano tapa-zinga no sotroina manala makafoka!
- Efa azonao ve ny tapakila hijerentsika Ambondrona hoy ilay vehivavy (hikikiaka izy avy eo hoe Tiako leisy iàlahy ra Kix (izay mpihiran'Ambondrona))!
- Tena tapaka aho lty nefa veriseran'i Kala amin’ny herinandro!
- Tapaka ny torimaso fa naneno ny kapoka atao fanairana eo amin'ny varavarana fa tena misy mpangalatra izany!
- Tapaka hatreo ny amintsika sy ianao vao mivoaka io varavarana io aho hoy ny vehivavy rahefa miady, tandremo mitaditady ahy eo avy eo an!
- Ka tapaho ny hevitrao na haka vady ahy ianao na tsia fa zaho tsy hiandry anao eo fa misy hafa vonona foana eo hoy ravehivavy!
Fa ny tena mibahana indrindra dia miaina mandavan-taona amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano!
Dia notapahana ireo andalan-tsoratra ireo (couper) ary na nopetahana teto (coller) ka notohizana tahaka izao :
• Hifanapahana ny sigara iray io ilay gonda na voambolana hafa araka ny vanim-potoana fa tapaka ihany e
• Hanapaka fihavanana ny mpitondra firenena dia manebaka angazety aloha na imasom-bahoaka ka moa tsy izany va nahazo ilay DG
• Tapaka ny fihavanana eo amin’ny mpanohana sy ny mpitondra fa tsy nahazo straspontin e (na ny mifanohitra amin’izay : tapaka ny fihavanana ao amin’ny samy mpanohitra fa hitady srtaspontin e)
• Tapa-kisatra ilay sprinter
• Tapa-kevitra ny zandary fa ho ravany ny tanana iray manontolo, tenin-dehilahy io na efa nisy Antsakabary aza tany aloha tany
• Tapaka ny karama fa somazy tekinika e
• Tapaka ny lalana fa tsy nahazaka an'ilay kamiao -azafady iza no tsy nanaraka ny fenitra eto e ilay lalana efa teo ve sa ilay kamiao nafarana taty hafara?)
• Tapaka ny hevitro fa tsy hanara-baovao intsony aho satria nanapaka ny fitondra fa hamoaka ny marina kanefa mbola tsy nivoaka ihany izany hatramin’izao
Tapahana aloha fa sao lava loatra marihina fa tsy notononina ny anaran'ilay tompon'ny rindrina nangalana ny ventin-dresaka sao manapa-doha na mapanaka fihavanana fa toa olona ambony izy iny
Samia velon’aina e amin'ny talata koa mifankahita
Punk rock : « Politôxic » un premier album né de la magie de la rencontre - il y a 3 mois
Savah Group : Namoaka ny DVD voalohany mitondra ny lohateny 'Ry Jesoa mofon’aina' - il y a 3 mois